Martial oo sharraxay sababta uu No. 9-aad gaar ugu yahay, muxuuse ka yiri Rashford? – Gool FM
(Manchester) 23 Agoosto 2019. Weeraryahanka reer France ee Anthony Martial ayaa sheegay sida weyn uu ugu faraxsan yahay kaddib markii uu dib u soo ceshaday maaliyada lambarka 9-aad, kaasoo uu horey ugu xirnaa Manchester United kahor imaanshiyaha Zlatan Ibrahimovic.
Martial ayaa lagu qasbay inuu ka tanaasulo maaliyada NO. 9-aad kaddib markii uu Zlatan Ibrahimovic.yimid garoonka Old Trafford, laakiin duruufaha oo isbadalay iyo bixitaanka Lukaku ayaa wuxuu markale fursad u helay inuu dib u helo Lambarkii 9-aad uu jeclaa.
Anthony Martial ayaa wareysi uu ku bixiyay Taleefishinka “TV2” wuxuu ku sheegay:
“Tan iyo markii aan yaraa, waxaan xirnaan jiray maaliyada No, 9-aad, waa lambarka aan ugu jeclahay”.
“Hadda waxaan awoodaa inaan ka ciyaaro booska aan jeclaa, waxaana doonayaa inaan cadeeyo inaan ahay kan ugu fiican”.
Intaas kaddib Anthony Martial ayaa wuxuu ka hadlay iskaashiga ka dhexeeya isaga iyo Marcus Rashford wuxuuna yiri:
“Aniga iyo Rashford si fiican ayaan u wada shaqeyneynaa, si wanaagsan ayaan isku naqaanaa midkeen kan kale gudaha garoonka iyo banaankiisa”.
“Waxaan si wadajir ah u wada ciyaareynaa dhowr sano, waa inaan shaqeynaa oo aan sii wadnaa wada shaqeynteena”.
Jawaabta qalbiga taabanaysa ee uu Paul Pogba ka bixiyey cunsuriyaddii lagula kacay, xilli uu soo qaatay xaaskiisa iyo tusaalooyin kale!!